कश्मीर मुद्दामा चीन पाकिस्तानको साथमा छ : पाकिस्तानी विदेश मन्त्री – The Public Today
कश्मीर मुद्दामा चीन पाकिस्तानको साथमा छ : पाकिस्तानी विदेश मन्त्री
विजय कुमार सिंह साउन २५, २०७६ ८:४६ am
साउन २५ गते : भारत प्रशासित कश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको दर्जाको संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० हटाएको विरोधमा पाकिस्तानले लगातार आवाज उठाइरहेको छ । भारतको पछिल्लो कदमको पाकिस्तानले आलोचना गर्दै आएको छ ।
पाकिस्तानले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जुटाउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ ।
यसैबीच पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशी चीन पुगेका छन् । बेइजिङमा उनले चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भारतले लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको चीन पनि रिसाएको छ । उसले आफ्नो असन्तुष्टि भारतसामु राखिसकेको छ ।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्री कुरैशीले चिनियाँ समकक्षीसँगको घेटघाटपछि भारतको आक्रामक कदमले दक्षिण एसियालाई नै खतरामा पारेको चीनको धारणा रहेको बताएका छन् । कुरैशीले चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटघाटको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै ३ वटा ट्वीट गरेका छन् ।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीले पहिलो ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘आज मैले चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी तथा अन्य अधिकारीका साथ निर्णायक छलफल गरेँ । पाकिस्तान र चीनबीचमा भाइचाराको सम्बन्ध रहेको छ । चीनले आज पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।’
Shah Mahmood Qureshi✔@SMQureshiPTI
Today I hadastrong and conclusive meeting with State Counsellor and Foreign Minister of China, Wang Yi. Pakistan sharesabond of brotherhood with China as further evidenced in the meeting today where China reassured Pakistan of it’s support and commitment. 1/3
4,26810:39 PM – Aug 9, 2019Twitter Ads info and privacy1,053 people are talking about this
त्यस्तै अर्को ट्वीटमा कुरैशी चीनका विदेश मन्त्रीले भारतको पछिल्लो कदमले कश्मीरी नागरिकलाई कष्ट पुगेको तथा उनीहरुको आवाज दबाइएको मान्ने बताउँछन् । भारतको पछिल्लो कदमले पुरै क्षेत्रलाई खतरामा धकेलेको चिनियाँ धारणा रहेको पाकिस्तानी विदेश मन्त्री कुरैशी दाबी गर्छन् ।
Foreign Minister Wang Yi has acknowledged that India’s aggressive stance on Kashmir leaves the people of Kashmir vulnerable and voiceless while also putting the entire region at risk. 2/33,65410:41 PM – Aug 9, 2019Twitter Ads info and privacy901 people are talking about this
तेस्रो ट्वीटमा कुरैशी भन्छन्, ‘पाकिस्तान शान्ति र स्थिरत ल्याउन चाहन्छ । त्यसमा चीनले समर्थन गरेको छ । हामी मिलेर कश्मीरका नागरिकको आवाज विश्वसामु उठाउनेछौँ ।’
China supports Pakistan’s repeated calls for peace and stability and we will work together to highlight the voice of Kashmiris to the world. 3/37,66810:42 PM – Aug 9, 2019Twitter Ads info and privacy1,715 people are talking about this
यसभन्दा पहिले चीनले कश्मीर मुद्दामा भारत र पाकिस्तानले संयमता अपनाउनु पर्ने बताएको थियो । चीनले दुवै देशले यथास्थिति परिवर्तन हुने खालका एकतर्फी कदम चाल्न नहुने बताएको थियो ।
चीनको बयानको प्रतिक्रियास्वरुप भारतले आफूले दोस्रो देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र अरुबाट पनि त्यही अपेक्षा गरेको बताएको थियो ।
भारतको पछिल्लो कदमबाट रिसाएको पाकिस्तानले प्रतिक्रियात्मक कदम चालिरहेको छ । उसले भारतसँगको द्विपक्षीय कारोबार बन्द गरिसकेको छ । पाकिस्तानले इस्लामाबादमा रहेको भारतीय उच्च आयुक्तलाई फिर्ता पठाउने तथा नयाँ दिल्लीमा रहेका आफ्ना उच्च आयुक्तलाई फिर्ता बोलाउनेसमेत निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यस्तै पाकिस्तानले लाहोरबाट भारतको अटारीबीच चल्ने रेल ‘सम्झौता एक्सप्रेस’ सधैँका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । पाकिस्तानका रेल मन्त्री शेख रशीद अहमदले आफूले सम्झौता एक्सप्रेस ‘सधैँका लागि बन्द गर्ने’ घोषणा गरेको बताएका छन् ।